बिचौलियाको जालो र पुँजीवादको चक्रव्यूह | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
बिचौलियाको जालो र पुँजीवादको चक्रव्यूह
२०७७ भाद्र २९, सोमबार १०:०२ गते
राज्य सञ्चालनमा सीमित समूहको पकड हुनु भनेको बिचौलिया हाबी हुनु हो । गणतन्त्र आएपछि मुलुक बिचौलियाले नै चलाइरहेका छन् । आज पुँजीवादलाई दुत्कार्ने सबैभन्दा सजिलो विशेषण ‘दलाल’ भएको छ । नेपालका अधिकांश उद्योगपति भनिनेहरु दलाल र बिचौलिया हुन्, तिनको स्वाभाव दलाल पुँजीपति हो । उद्योगी को छ यहाँ ? यहाँ त उद्योग नै छैन, खालि व्यापारमात्रै हो । दलाल अर्थतन्त्रमा मौलाउने भनेको बिचौलिया नै हो । हुन त, नेपालमा वैधानिकरुपमा चिनिने दलाल त शेयर मार्केटमा मात्रै छ । अरु कोही पनि दलालको ‘ट्याग’मा छैनन् । उद्योगपति, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, वकिल, प्रोफेसर, पत्रकार आदिको ट्यागमा यहाँ दलाल सक्रिय छन् । हरेक पेसामा दलालको उपस्थिति देखिन्छ । त्यसकारण को दलाल भन्ने पत्ता लगाउन यहाँ गाह्रो छ । समाजका हरेक पाटामा दलाली जोडिएको छ । जहाँ पुँजीवाद र राज्यसत्ता जोडिन्छ त्यहाँ दलालीपन प्रवद्र्धन हुन्छ ।
नेपालमा हरेक राजनीतिक आन्दोलनले एउटा परिवर्तन ल्यायो । तर, त्यसले दलाली गर्ने समूहलाई जन्म दियो । पञ्चायतमा दलाली समूह थियो, बहुदलमा थपियो । गणतन्त्रपछि पनि थपियो । दलालीकरण अझै विस्तार हुँदैछ । नयाँ राज्यगत संरचनामा पनि यो तत्कालै रोकिएला भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्न । वामपन्थी त जनमुखी हुनुपर्ने हो, राज्य संयन्त्र प्रभावकारी हुने दर्शन भए पनि वामपन्थीहरु त्यसबाट धेरै विमुख छन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा दलालहरुको ध्यान बढी केन्द्रमा थियो, अब राज्य विकेन्द्रित भएजस्तै दलालको सञ्जाल पनि विस्तार भएर तल जाँदैछ । नेपाली समाजमा पुँजीवाद अलिक बढी हाबी भयो ।
संसारका अधिकांश मुलुकमा पुँजीवाद अभ्यासमा छन् । तर, त्यहाँको अवस्था नेपालको जस्तो छैन । युरोपले पुँजीवाद जन्मायो, हामी त्यसको अङ्ग हुन पुग्यौँ । हामी युरोपियन पुँजीवादको घरमा पाहुनाको रुपमा छि¥यौँ । युरोपमा औद्योगीकरण र तत्कालीन समाजको खास चरित्रका आधारमा पुँजीवाद विकास भएको हो, त्यसैले त्यहाँ सफल भयो । हाम्रोमा त्यो आधार छैन, त्यसकारण हामी यसमा सफल हुन सकेका छैनौँ । हाम्रोमा राज्यले नियमनकारी भूमिका खेल्न सकेन । नेपालमा कुनै पनि प्रणालीले काम गर्न सकेन । पञ्चायतले पनि सकेन । बहुदलले पनि काम गरेन । अहिलेको गणतन्त्रको बारेमा अझै हेर्न बाँकी नै छ । हुन पनि जनआन्दोलनपछिको समयमा अदालत, अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायहरु पार्टीको भागबन्डामा चल्न थाले ।
स्वार्थ समूहका मान्छेहरु नै नियुक्त हुँदा अनुसन्धान र न्यायनिरुपणप्रति नागरिकको भरोसा उड्दै गयो । भागबन्डा नमिलेकै कारण अधिकांश संवैधानिक निकायहरु ०७१ देखि खाली छन् । अहिले पनि सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरुबीच कसका मान्छेलाई कुन ठाउँमा भर्ती गर्ने भनेर भेटघाट बाक्लिएको छ । यो खालको प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा दुःख गरेर व्यवस्था परिवर्तन गरेका दलहरु कुनै न कुनै बेला नराम्रोसँग अप्ठ्यारोमा पर्ने विश्लेषण स्वयं नेताहरुको पनि छ । नेकपाका नेताहरुकै बीचमा निर्वाचन प्रणाली एकदमै महँगो भयो भन्ने कुरा बारम्बार उठिरहन्छ । अघिल्लो निर्वाचनमा व्यापारीहरुले लगाएको गुन अर्को निर्वाचनसम्म पनि तिरिनभ्याइने, उनीहरुले जे–जे भन्यो त्यही–त्यही बोलिदिनुपर्ने गुनासो कतिपय नेताहरु नै गर्छन् ।
नेताहरुको देखिने आम्दानी खासै हुँदैन, तर जीवनशैलीमा तडकभडक छ । राजनीतिमा उति लामो समय नबिताएका र सुविधाको पदमा नपुगेका युवानेताहरुले समेत महँगा गाडी चढेको र आलिसान घर बनाएर बसेको देखिन्छ । चुनाव यति खर्चिलो छ कि सामान्य मान्छे चुनाव लड्नै सक्दैन । या त पर्याप्त पैसा हुन प¥यो, या त बिचौलियालाई प्रयोग गर्नुपर्छ ।
नेताहरुमा बिचौलियाको दबदबा चुनावदेखि चुनावसम्म नै छ, त्यसलाई हटाउन चुनाव प्रणाली सस्तो बनाउनैपर्छ । बिचौलियाको सम्बन्ध सिंहदरबारमा बस्ने सत्तासँग मात्रै छैन, समानान्तर सत्ता भनेर पनि चर्चा हुने अख्तियार, संसद्को लेखा समितिलगायत निकायसम्म छ । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वसँग साँठगाँठ मिलाउने बिचौलिया ठेकेदारदेखि कानुन व्यवसायीको आवरणमा छन् । राज्यका शक्तिकेन्द्र र केही निकायका मह¤वपूर्ण पदमा बिचौलियाको आँखा पर्ने गरेको देखिन्छ । सेना, प्रहरी अनि सशस्त्रजस्ता सुरक्षा निकायमा उनीहरुको ध्यान पुग्ने गरेको छ ।
पुँजीवाद जनताका लागि सबैभन्दा खराब व्यवस्था हो । लुटपाट, आगजनी, हस्तक्षेप, आक्रमण यसको चरित्र हो । पुँजीवादले धनीलाई झन्झन् धनी बनाउने र गरिबलाई झन्झन् गरिब बनाउने काम गर्छ । अत्याचारी शासनप्रणाली भएको हुनाले यसको विरूद्धमा विरोध पनि हुन्छ । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय युद्ध पनि हुन्छ । दुई ठूला विश्वयुद्ध पुँजीवादकै गर्भबाट जन्मिएका हुन् । डरलाग्दो मन्दी पनि यसैले भोगेको छ पटकपटक । तर अनौठो ! यो पुँजीवाद ढल्नढल्न खोजेर फेरि ठिङ्ग उभिइहाल्छ । राजनीतिक नेतृत्व लगभग माफियाको हातमा पुगिनै सकेको छ । व्यापारी पुँजीपतिहरुको स्वार्थ सत्ताले मात्रै पूरा गर्ने भएकाले सत्तामा जो पुग्छन् उनैसँग नजिक नजिक भएर लाभ लिने गरेका छन । हिजो व्यापारीहरुको शक्ति एउटा ठाउँमा थियो, बीचमा विभिन्न ठाउँमा पुग्यो, अहिले फेरि शक्ति केन्द्रीकृत भएको छ । देशको आर्थिक दायरा जति ठूलो भयो भोल्युम पनि त्यति नै बढ्ने हो ।
आज पनि समाजको एउटा वर्ग गरिबको गरिब छ । उसको अवस्था हिजो जहाँ थियो आज पनि त्यहीँ छ । जो गरिबीमा रहे उनीहरुको जीवन कष्टकर छ । उनीहरुको पहिले र अहिलेको जीवनमा ता¤िवक अन्तर छ । यता सम्पन्नता बढ्दैछ भने अर्कोतिर विपन्नता पनि बढ्दै गएको छ । एकातिर राजनीतिमा भ्रष्टीकरण अर्कातिर राज्य संयन्त्रको ब्युरोक्रेसीमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालो, यी दुई कारणले गर्दा सरकारमा स्थिरता आएछ नै भने पनि अहिले नारा दिइएजस्तो विकास निर्माण हुन गाह्रो छ । अर्को, कुनै मात्रामा विकास भएछ नै भने पनि त्यसबाट ल्याउने समृद्धिको फल आमश्रमिक जनता, महिला, पिछडिएको क्षेत्र, युगौँदेखि पछाडि पारिएका जाति, जनजाति, दलित, मधेसीलगायत अन्य जनसमुदायले अत्यन्त सीमितमात्रै प्राप्त गर्नेछन् ।
राज्यसत्ता दलाल पुँजीवादी वर्गको हातमा छ, संविधान त्यो वर्गको अनुकूलतामा बनेको छ, अर्थप्रणाली र अर्थनीति दलाल पुँजी हाबीका लागि अनुकूल नवउदारवादी सिद्धान्तमा आधारित छ, संविधानमा समाजवादको शब्द लेखिएको त छ तर त्यो दिशामा जान निजी सम्पत्तिमा आधारित मुख्य निर्देशक सिद्धान्तले राज्यलाई अनुमति दिँदैन, राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको कुरा गरिएको त छ, तर उदारवादमा आधारित अर्थतन्त्रले त्यतातर्फ जान अनुमति दिँदैन । नयाँ सरकार बनेपछि निकटवर्तीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने प्रक्रिया लोकतन्त्रमा समेत सामान्य मानिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कसैलाई नियुक्ति दिँदा विभिन्न प्रक्रियाको अवलम्बन गर्ने गरिन्छ, तर राजनीतिक नियुक्तिको आधार त छैन नै, त्यसबाट उत्पन्न हुने प्रभावका बारेमा समेत ध्यान दिइएको पाइँदैन ।
दलाल पुँजीवादले देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोतिर जाने हरेक क्षेत्रको लगानी र पुँजी निर्माण प्रक्रियालाई हतोत्साहित गर्छ । राज्यका हरेक क्षेत्रबाट हुने राष्ट्रिय लगानीलाई निरूत्साहित गर्दै साम्राज्यवादी पुँजीको सेवा गरी देशलाई परनिर्भर बनाउनु दलाल पुँजीवादको आधारभूत चरित्र हो । दलाल पुँजीवाद नेपालको ऐँजेरू झार हो । यसले नेपाली जनजीवनलाई नराम्ररी गाँजेको छ । यो नै देशको प्रगतिको बाधक हो । दलाल पुँजीवादको राजनीतिक सत्तासँग अत्यन्त बलियो लगनगाँठो गाँसिएको व्यवहारतः पुष्टि हुन्छ ।
यहाँ दलाल अर्थतन्त्रको जगमा टिकेको संसदीय लोकतन्त्र, स्वतन्त्र बजार र निजी सम्पत्ति अनि यसैले अथ्र्याएको भौतिक विकास नै आधुनिक जीवनशैली हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । आधुनिक विकासले बाँडेको भौतिक सुविधाको यो सपनामा बाँच्न पाउन यस पृथ्वीमा रहेका सबै मानिसलाई सम्भवै छैन । दुर्भाग्यवश केही सीमित शासकमात्रै सुविधासम्पन्न हुन सक्ने यस्तो आधुनिक विकास हाम्रो समृद्धिको सपना बन्यो । यही सपना बाँड्दै अहिले आफू र आफ्नाका लागिमात्रै भौतिक सेवासुविधा र सम्पन्नता बढाउन संसारभरि लुटपाट चलिरहेको छ । यसमा नेपाल पनि अपवाद छैन । यस्तो लुटपाट गर्न अहिले नेपालमा पुँजीवादी अर्थतन्त्रका हिमायती र समाजवादी टोपी लगाएका राजनीतिका दलाल एकै ठाउँ छन् ।
अहिलेको भूमण्डलीकृत पुँजीवाद र दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताले ल्याउने विकासले उनीहरुकै चिहान खन्ने पक्का छ, जसरी उपनिवेशकालमा औपनिवेशिक राष्ट्रहरुमा साम्राज्यवादले गरेका विकास निर्माणले उनीहरुविरूद्धको क्रान्तिलाई औजार प्रदान ग¥यो । नेपालमा रेल, सुरूङमार्ग, हावाईमार्ग, विमानस्थल, फराकिला बाटाघाटा, मुलुकभर सडक सञ्जाल, मुलुकभर इन्टरनेट सेवा, रेडियो, टेलिभिजन, मुलुकभर सहज बजारीकरण, आधुनिक कृषि प्रणाली, हजारौँ मेगावाटको बिजुली उत्पादन यी यावत् विकासले भूमण्डलीकृत पुँजीवादभित्रका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु र मुलुकभित्रका दलाल पुँजीवादीहरुलाई मालामाल गर्ने र आमजनता उनीहरुको दाँजोमा कङ्गाल बनाउने त पक्कापक्की छ, तर त्यसले भूमण्डलीकृत र दलाल पुँजीवादविरूद्ध लड्न आमजनतालाई एकीकृत, आधुनिक औजार एवं सञ्चारबाट सुसज्जित र ज्ञानमा समृद्ध पार्न पनि उत्तिकै आधार निर्माण गर्दछ ।
वैज्ञानिक समाजवादका अभियन्ताहरुले अहिले मुलुकमा चलाइएको ‘विकास र समृद्धि’को नारा र कार्यक्रम भूमण्डलीकृत पुँजीवादलाई अन्त्य गर्ने औजार बन्नेछन् भन्नेमा प्रस्ट हुनु पनि पर्छ र साथै त्यस्तो बनाउने कसरत पनि गर्नुपर्दछ । अहिलेको ‘विकास र समृद्धि’ नारा मूलतः निकट भविष्यमा मृत्यु हुन गइरहेका भूमण्डलीकृत विश्व पुँजीवाद र राष्ट्रिय दलाल पुँजीवादको चिहान बन्छ, बनाइनुपर्दछ । म पुँजीवादी हुँ भन्नेको त हाम्रोजस्तो देशमा राजनीति नै चल्दैन । व्यक्ति, समाज र राज्यको चरित्र पुँजीवादी नै हुने, तर भन्नचाहिँ नहुने अनौठो ढोङबाट हाम्रो राजनीति र समाज ग्रसित छ । झन् अहिले त ‘दलाल पुँजीवाद’विरोधी भाष्यले मिडिया रंगिएका छन् । नेपालमा पुँजीवाद र समाजवादलाई जसरी हेरिन्छ, वास्तवमा यी त्यस्तै हुन् कि होइनन् भन्नेतर्फ धेरैको ध्यान गएको देखिँदैन । सुन्दा जे मीठो लाग्छ त्यही राम्रो ठान्ने धेरै छन् ।
अहिलेको राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रता सित्तैको होइन । नेपालीले यसका लागि आधा शताब्दीभन्दा बढी लड्नु परेको हो । हामी अहिले यी दुवै स्वतन्त्रताको मूल्य थाहा नभएको जस्तो गर्दैछौँ । हामी आर्थिक स्वतन्त्रताको मूल्य बुझ्ने कोसिस गर्दैनौँ । किनकि, हामी पुँजी र व्यवसायीप्रति नकारात्मक धारणा राख्ने राजनीतिबाट दीक्षित छौँ । आर्थिक स्वतन्त्रतालाई दुत्कार्ने यो ‘दलाल पुँजी’को भाष्य अमूर्त र भ्रमपूर्ण छ । राजनीति र समाजका सबै विकृतिको जड पुँजीलाई ठान्ने कस्तो आर्थिक व्यवस्था हामीले चाहेका छौँ ? समस्या प्रवृत्तिमा छ कि पुँजीमा ? हामी स्वतन्त्रता खुम्च्याउन चाहन्छौँ कि फैलाउन ? राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरु दोहनकारी बनाउन चाहन्छौँ कि समावेशी ? हामी राज्यका संस्था निर्माण गर्न चाहन्छौँ कि भत्काउन ? हामी कुन बाटो हिँड्न चाहन्छौँ ? यसर्थ, यी अहिलेका यक्ष प्रश्न हुन् ।